अर्थ – Kavreonline
Uncategorized अन्तरबार्ता अन्तरास्ट्रिय कथा खेलकुद देश धर्म
काठमाडौं, २२ जेठ । ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रहरुमा आफ्नो सशक्त उपस्थिति एवं विद्युतीय प्रविधि प्रयोग गरी विभिन्न डिजिटल बैंकिङ सेवामा समेत आफ्नो अग्रणी स्थान कायम राख्न सफल यस एनआईसी एशिया बैंकले मुस्लिम समुदायको पवित्र चाड ईद–उल–फितरका…
काठमाडौं : गुगलले विश्वकै सबैभन्दा दोस्रो ठूलो स्मार्टफोन निर्माण कम्पनी हुवावेको एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टमका अपडेट रोक्ने निर्णय गरेसँगै त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली बजारमा परेको छ । अमेरिकी नीतिसँगै नेपालमा हुवावे स्मार्टफोनको कारोबार…
kavreonline	 May 30, 2019
काठमाडौँ : सरकारले रेल तथा पानीजहाज सञ्चालनका लागि एक खर्ब ७३ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले रेल तथा पानीजहाज सञ्चालनका लागि सो रकम…
चुरोट र मदिरामा मात्र होइन, पेट्रोलियम, खाद्यपदार्थ तथा सिमेन्ट र रडको पनि मूल्यवृद्दि
सरकारले मदिरा, चुरोट, अन्य सूर्तिजन्य पदार्थ र स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस्तुमा लाग्ने भन्सार र अन्तःशुल्क बढाएको छ। भ्याटको दायरामा आउने कारोबार सीमा रकम र दर यथावत छ। कृषिजन्य र औद्योगिक उत्पादनलाई संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गरी स्वदेशी…
फेरी घट्यो सुनको भाउ , यस्तो छ मुल्य
काठमाडौं । आज सोमबार सुनको भाउ ओरालो लागेको छ। हिजो ५९ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको भाउ आज एक सय रुपैयाँले घटेर ५९ हजार ६ सय रुपैयाँमा झरेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। आज तेजावी सुनको मूल्य पनि ओरालो लागेको छ।…
टिभिएसका मोटरसाइकल अब नेपालमै बन्ने !
kavreonline	 May 20, 2019
काठमाडौँ – टिभिएसका मोटरसाइकल तथा स्कुटर अब नेपालमै बन्ने भएको छ। नेपालमा टिभिएसका दुई पांग्रे बिक्रीवितरणको जिम्मा पाएको जगदम्बा मोटर्सले टिभिएसका मोटरसाइकल तथा स्कुटरको नेपालमै एसेम्बल गर्ने तयारी गरेको हो। नेपालमै एसेम्बल गर्नका लागि…
पेट्रोलियमको मुल्य घट्यो
kavreonline	 May 17, 2019
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य घटाएको छ । निगमले शुक्रबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलमा २ र डिजेल, मट्टितेलमा १–१ रुपैयाँ घटाएको हो । भारतीय आयल निगमले पठाएको मूल्य सूची अनुसार इन्धनको मूल्य घटेको छ। पेट्रोल…
बाँझो जग्गा भाडामा लिएर यि युवाले गरे सामूहिक तरकारी खेती , गर्छन मासिक यति आम्दानी , आम्दानी बढेको…
kavreonline	 May 10, 2019
म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–२ बगरफाँटमा पाँच युवाले सामूहिक तरकारी खेती शुरु गरेका छन् । आठ रोपनी जग्गा भाडामा लिएर चार युवाले व्यावसायिक रुपमा तरकारी खेती शुरु गरेका हुन् । गणेश केसी, जगत बानियाँ, कृष्टि बानियाँ, मनोज कार्कीलगायतका युवाले…
kavreonline	 May 9, 2019
धेरै नेपालीले बाख्रा पाल्छन्। बाख्राको मूल्य कति पर्छ भन्ने मोटामोटी अनुमान सबैलाई हुन्छ। तर, झापाको एक गाउँमा बाख्राको पाठाकै मूल्य पनि गाईभैँसी वा घोडाको भन्दा वढी छ भन्दा पत्याउन गोह्रो पर्छ। झापा हल्दिबारी गाउँपालिका–१ गोलधापका गणेश…
यो हो संसारकै सबैभन्दा महँगो हिरा, मूल्य कति ?
काठमाडौंः एक दुर्लभ गुलावी हिरा ५० मिलियन डलरमा विक्रि भएको छ । यो प्रतिक्यारेट मूल्यको हिसाबले विश्व रेकर्ड हो । ‘पिङ लेगेसी’ नामको यो हिरा केवल १९ क्योट गह्रौं छ । यसलाई अमेरिकी ब्रेन्ड ह्यारी विन्स्टनले जेनेभामा लिलामीमा खरिद गरेका…